> Resource > Ladnaansho > NTFS Drive Data Recovery: Sidee inuu ka soo kabsado Xogta laga NTFS digsi
Waxaan ka formatted NTFS Drive soo kaban karto, Data?
Waxaan si qalad ah formatted xijaab on my computer. Waa disk NTFS ah. Waxaan leenahay badan oo sawiro iyo filimo ka qiimo badan ku wadid in. Waxaas oo dhan waxay ku baaba'aan. Run ahaantii waxaan u baahan files aan dib. Qof fadlan i caawin kartaa? Thanks.
NTFS waa habka caadiga ah file ee Windows OS. Wixii mudnaanta ay of file weyn wareejinta iyo sirta file, dadka isticmaala Windows iyo aad u badan u isticmaali on drives ay adag tahay. Si kastaba ha ahaatee, xogta on NTFS drive weli lagu lumin karaa sabab u formatting disk, tirtirka file, Baadi nidaamka iyo sababo kale. Xalka loo baahan yahay marka uu aqrinayo this NTFS arrinta disk khasaaro xogta.
Wondershare Data Recovery , ama Wondershare Data Recovery for Mac waa barnaamij soo kabashada xogta drive NTFS ah in aad u saamaxaaya in ay soo kabsadaan xogta la tirtiro ama formatted ka NTFS disk in hab fudud oo ammaan ah. Iyada oo taageero ka barnaamijkan, waxaad awoodi doontaa inay ka soo kabsadaan faylasha sida videos, sawiro, files audio iyo ka badan oo ka NTFS drive adag on your computer Windows.
Waxaad kala soo bixi kartaa version tijaabo ah barnaamijka inuu ka soo kabsado xogta ka NTFS disk hadda ah.
Kabsado Xogta laga NTFS Drive in 3 Talaabooyinka
Fiiro gaar ah: Fadlan ha soo dajiyo barnaamij ku saabsan NTFS la wado in xogta aad ka lumay.
Tallaabada 1 Dooro habka soo kabashada ah si ay u bilaabaan soo kabashada xogta drive NTFS
Sida aad ka arki kartaa image hoos ku qoran, waxaad heli doontaa 3 hababka soo kabashada ka dib markii ay barnaamijka. Waxaad ka akhrisan kartaa tilmaamaha ay si taxadar leh si aad u barato sida ay u shaqeeyaan.
Halkan, inuu ka soo kabsado xogta lumay ama la tirtiro ka NTFS disk, aynu dooro "lumay Recovery File" mode hore.
Fiiro gaar ah: Haddii xogta lumay ay sabab u tahay NTFS formatting drive, fadlan dooro "Recovery ah Barzakh," mode.
Tallaabada 2 Sawirka wadid aad NTFS si ay u eegaan xogta laga badiyay
Markaas kaliya aad u baahan tahay in ay doortaan warqad drive ee disk NTFS in aad doonaysid in aad ka soo kabsado Xogta laga helay oo guji "bilow" button in aynu barnaamijka waxa laga baarayo.
Tallaabada 3 Ladnaansho xogta ka NTFS drive adag
Ka dib markii iskaanka, dhammaan faylasha ogaado on your drive NTFS adag lagu soo bandhigi doonaa "Nooca File" ama qaybaha "Folder". Waxaad ka arki kartaa magacyada asalka file si loo hubiyo in xogta aad badiyay la aan dib ula karo ama.
Ugu danbeyn, kaliya aad u baahan tahay si ay u xusaan files aad u baahan tahay oo ka dhacay on "Ladnaansho" badhanka si ay u soo celin your computer badbaadiyo.
Fiiro gaar ah: Si looga fogaado xogta overwritten, fadlan ha ku hayn faylasha kabsaday dib ugu qoruhu ay asal on your computer.
Sidee inuu ka soo kabsado Xogta laga External Hard Disk laguma ogaan karo